Nahita Andriamanitra mpamela heloka
"Fa Andriamanitry ny famelan-keloka Ianao ka miantra sy mamindra fo, mahari-po sady be famindrampo." Nehemia 9:17
“Teraka tany Vevey (Suisse) aho, tao amina ankohonana kristiana. Nihalehibe aho, ary nahatsapa mandrakariva fa misy Andriamanitra. Na izany aza anefa, dia tsy nahafantatra Azy tamin’ny foko aho. Ireo toriteny maro reko, ireo boky novakiako dia niditra tao an-dohako, saingy mahalana ihany vao tafapaka tany am-poko. Izany rehetra izany dia nahatonga ahy hanana fiainana feno “tsy maintsy” sy fombafombam-pivavahana tsy dia misy heviny.
Nahomby tsara aho tamin’ny fianarako, ka nanapa-kevitra ny hiasa ao amin’ny sehatry ny fitantanana orinasa. Toa nandeha tsara avokoa ny zavatra rehetra! Saingy nahakivy, fa nisy banga tsy hay nofenoina tao am-poko.
Ary indray andro aho dia nahita lehilahy iray tokony ho nahomby tanteraka arak’asa, nefa nandao ny zavatra rehetra ka nanampy ny hafa. Namangy marary izy, nitsidika olona mijaly. Nahoana no dia mampanontany tena ahy toy izany ny nataony?
Tamin’izany fotoana izany koa no nihaonako tamina tovovavy izay hanjary vadiko. Nanadihady ahy momba ny fifandraisako amin’Andriamanitra izy. Nanontany ahy hoe Iza io Jesosy resahiko io. Nahoana Izy no maty? Ahoana ny fomba nitsanganany tamin’ny maty? Nahoana Izy no tia antsika? Nandritra ny herinandro maromaro dia namaky ny Baiboly izahay, nifanakalo hevitra. Nony farany dia nahakasika ny fony ny fitiavan’i Jesosy. Nandray Azy tao am-pony izy, ary hatreo dia fiainana vaovao no nanomboka ho azy … ary ho ahy koa. Nanohina ahy ireny fifanakalozan-kevitra sy fanontaniana ireny. Rehefa nandeha teny ny fotoana, dia niha nalefaka ny foko ; tsy Andriamanitry ny didy aman-dalàna intsony no hitako, fa Andriamanitry ny fitiavana sy famelan-keloka. Dia takatro nony farany, fa tsy hoe maty ho ahy fotsiny Jesosy Kristy, fa te hanova ihany koa ny fiainako.”